काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानले कोरेको दायरा बाहिर गएर कदम चालेको अधिवक्ता राजु चापागाईंले बताएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धमा मुद्दामाथिको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदातलको संवैधानिक इजलासमा चापागाईंले प्रधानमन्त्रीलाई दायराभित्र ल्याउनुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने बेलासम्म कसैबाट असहज मानेनन्। दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने बेलासम्म मजाले इन्जोय गर्नुभयो। जब संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने र विश्वासको जाँच हुनुपर्ने बेला भयो त्यतिबेला संसद विघटन गर्नुभयो।’
प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा १००, जसमा विश्वासको प्रस्ताव संसदमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, त्यसको उपयोग नभएको उनले बताए। प्रधानमन्त्रीले संविधानको उक्त धारा उल्लंघन गरेकाले सर्वोच्चले मान्यता दिन नसकिने बताए। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई खेल मैदानमा फर्काउँ, उहाँले खेल मैदान बाहिर गएर गोल गरिराख्‍नु भएको छ।’
बारम्बार संवैधानिक इजलासले संसद् पुनःस्थापना गरेमा अर्को सरकार बन्ने अवस्था छ कि छैन ? भनेर गरिएको प्रश्नप्रति पनि चापागाईंले असन्तुष्टि जनाए। उनले भने, ‘इजलासले वैकल्पिक सरकार बनेर आएको हो कि होइन ? भनेर सोध्ने हो। वैकल्पिक सरकार बन्छ कि बन्दैन ? भनेर इजलासले सोध्ने होइन।’
सरकार गठन गर्ने दायित्व संसदको भएको र गठन गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन नसकेमा संसद् संविधानअनुसार विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पनि चापागाईंले तर्क राखे। प्रधानमन्त्रीले दुरासाय राखेर संसद विघटन गरेको उनको भनाइ थियो।